Baby ehichapụ - JUAN JUAN
Akpụkpọ ahụ dị nro na nke dị nro nke ala ụmụ ọhụrụ nwere ekele maka usoro eji esi mmiri mmiri Aloe Vera
Nke ahụ jiri nwayọ na-ehicha ma na-eme ka anụahụ ụmụ ọhụrụ dị nro na moisturized.
A na-enweta ya n'ụdị dị ka ngwugwu na-esi ísì ụtọ, ngwugwu na-enweghị isi na tubs na-enweghị isi.
Nwa anyị na-ehichapụ zuru oke maka mkpa onye ọrụ njedebe gị niile.
JUAN JUAN nwa na-ehichapụ zuru oke maka itinye ya na:
Lọ Ọrụ Ndị Isi.
Iji jide n'aka na mma kacha mma nke nwa na-ehichapụ
III.pedị usoro dị ọcha na mmiri dị ọcha nke usoro ọgwụgwọ RO ga-arụ ga-abụrịrị ọkachamara, na akara nke mkpọ dị nro kwesịrị ịdị mma iji kpochapụ nhichapụ ahụ, ma ọ bụghị, nhichapụ ga-acha odo odo na ụmụ nje ga-esi na nsị ahụ pụta.
Ngwunye n'efu BPA ga-adị mkpa maka nhichapụ ụmụaka eco-enyi na enyi, na ijide n'aka na edobe mmiri mmiri ahụ ogologo oge enwere ike na obere akpa na-ehichapụ a. a na-eji ihe nkiri aluminum mee ihe maka mbukota. b. usoro akara na mmepụta mmiri na-ehichapụ mmiri dị mkpa. (dịka ọmụmaatụ: akara atọ ma ọ bụ akàrà anọ n'akụkụ)
Gbaa mbọ hụ na ogo na ihichapụ mmiri dị mkpa, mana arụpụtaghị ihe dịkwa mkpa
100 Cts otu mkpọ
Ileba Ibu 19kgs 41.8lbs
Ileba Dimensions 43x34x22cm 17.2 "x13.6" x8.8 "
UNIT Ibu ibu 0.61kgs 1.342lbs
Nke gara aga: Ihe eji achọ mma
Osote: 75% Mmanya Na-ehicha